IGenesis Casino South Africa Ukubuyekezwa 2021
Ikhaya / Amakhasino / isibyekezo se-genesis casino
Isibyekezo se-Genesis Casino
Isofthiwe:Microgaming, Play n GO, Quickspin, Evolution Gaming, NetEnt
Ibhonasi Lokukwamukela:Ize ifike R15,000 Ibhonasi
300 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Enye yamakhasino aku-inthanethi ahlonipheka kakhulu atholakala kubadlali baseNingizimu Afrika iGenesise Casino, okuwumkhiqizo othole amalayisense kuziphathimandla ezinzima kakhulu embonini, njengeKhomishini YezokuGembula yase-UK kanye neMalta Gaming Authority.
Lokhu kubalulekile ngoba kusho ukuthi i-Genesise Casino kufanele igcine amazinga aphezulu aphakeme kakhulu ngokuphepha kwesayithi kanye nemidlalo efanelekile. Uma ingakwenzi, khona-ke izolahlekelwa yilayisense yayo – ilula njengaleyo!
Isungulwe ngo-2018, i-Genesise Casino isievele yazakhela igama eliqinile ngemuva kwelabhulali yayo yemidlalo emikhulu, inkundla yayo yokukhokha esheshayo, kanye nebhonasi yokwamukela enomusa.
2021 Amakhodi Amabhonasi Okwamukela e-Genesis Casino
I-100% idiphozi efinyelela ku-R15,000 & 300 spins yamahhala Mane wenze idiphozi yakho yokuqala noGenesise Casino futhi izohambisana nalokhu ngo-100% emalini yebhonasi kuze kufike ku-R15,000 Oh, futhi iphonsa ngisho nama-spins amahhala ku-mix!
Kulula impela ukubiza ibhonasi eyamukelekile – mane ubhalise i-akhawunti entsha yomdlali ngeGenesis Casino, nasengxenyeni yedeshibhodi ye-akhawunti yakho, uzobona ithebhu ethi ‘Amabhonasi’. Chofoza lokhu futhi uzobona konke ukukhushulwa okutholakala kuwe ngokuchofoza inkinobho.
Ngalesi sikhathi samanje, i-Genesise Casino akanikeli ngebhonasi yokungafakwa – futhi ngakho-ke ngeshwa awekho amakhodi ebhonasi angafakwa ongawasebenzisa. Uma lesi simo sishintsha ngokuzayo, sizoqiniseka ukuthi sibuyekeza lesi sigaba sokubuyekeza.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa i-Genesise Casino
Ngesikhathi sokubhala lesi sibuyekezo, i-Genesise Casino akanikeli ngamaphromoshini angeziwe ngaphezulu kwebhonasi yawo yokwamukela.
Lokhu akujwayelekile ngoba, esikhathini esedlule, lo mkhiqizo unikeze ngamaphromoshini anhlobonhlobo athakazelisayo, kufaka phakathi amabhonasi wokuphinda ulayishe masonto onke, ama-spins wamahhala wokupha kanye nebhonasi yalo ehlukile ye-‘Lucky Star ‘.
Singathemba nje ukuthi i-Genesise Casino ingeza amaphromoshini amasha kuwebhusayithi yawo kungekudala.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi ku-Genesis Casino
Uma ungena ku khasi lasekhaya le-Genesis Casino, uzobona zombili izinketho zokungena nokubhalisa, ezichofozeka ngokusebenzisa izinkinobho zazo.
Okokuqala, kuzodingeka ukuthi ubhalisele i-akhawunti. Ungakwenza lokhu ngokuchofoza inkinobho yokubhalisa, ukufaka imininingwane eceliwe, ukhetha igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi, bese uqedela inqubo. Kuzoba nenqubo yokuqinisekisa kepha, ingxenye enkulu, uzokhululeka ukufaka futhi uqale ukudlala ngezikhathi ezithile.
Uma i-akhawunti yakho isibukhoma, ungangena kalula ngokuchofoza inkinobho bese ufaka iziqinisekiso zokungena ngemvume ozidale ngesikhathi sokubhalisa.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala ku-Genesino Casino
Ngesikhathi sokubhala, kunezindawo ezingaphezu kwezinkulungwane ze-slots, imidlalo yetafula kanye nezihloko ze-jackpot zabadlali be-Genesise Casino abazama, ngakho-ke akusikho ukuthi maduzane uzophelelwa izinketho lapha!
Njengoba sesibonile ngenhla, i-Genesise Casino isayine amadili ngokuthandwa yi-NetEnt, Microgaming ne-Play’n Go ukuyihlinzeka ngemidlalo ehamba phambili etholakalayo namuhla.
Yingakho uzothola iqoqo le-eclectic e-Genesis Casino elinamagama amakhulu afana ne-Starburst, Book of Dead, Gonzo’s Quest, Twin Spin nokuningi.
Kodwa-ke, kunezikhala eziningi ze-niche okungenzeka ukuthi uzijabulele kwamanye amasayithi lapha, futhi-ke, kukhona ukukhethwa okuconcisa amathe kwemidlalo ye-jackpot eqhubekayo nejwayelekile lapho ungazama khona ukuwina izamba zemali ezishintsha impilo – iMega I-Moolah, Divine Fortune kanye ne-Imperial Riches zenze izigidigidi phambilini.
Akukho matshe ashiywe engaguqulwanga e-Genesise Casino maqondana nokukhethwa komdlalo wetafula lawo.
Uzothola inqwaba ye-blackjack – kusuka kuzinguqulo zakudala kuya kwezingu-European kanye nezandla eziningi zomdlalo, ukubala nje ezimbalwa – nezinguqulo ze-roulette – i-European, French, American, VIP, Lightning.
Kukhona nenani elinikezayo lokuhlukahluka kwe-poker – kusuka eCasino Hold’em kuye eCasino Stud – neminye imidlalo yamakhadi efana ne-baccarat nePunto Banco.
Eminye Imidlalo Inikelwe
Kunezinye izintandokazi zabalandeli ezingasampula, kufaka phakathi izihloko ezidumile i-Dragon Tiger ne-Dream Catcher, kuyilapho umdlalo wamadayisi wakudala i-Sic Bo nawo umelwe.
Imininingwane mayelana neCasino
Kusungulwe: 2018 Inombolo Yamahala YaseNingizimu Afrika: 0800992824
Opharethwa ngu: Genesis Global Ltd I-imeyili: [email protected]
Inguqulo Yokulanda: Cha Ukuxhaswa kwe-24/7/365: Yebo
I-Genesis Mobile Casino: Uqhathanisa Kanjani u-Genesise Casino kuselula?
Uma ufuna ukudlala ku-Genesis Casino kuselula yakho, kufanele wazi ukuthi alukho uhlelo lokusebenza ongalulanda ongalengeza kudivayisi yakho ye-Apple noma ye-Android.
Kodwa-ke, inguqulo yeselula yesayithi lesiphequluli yenzelwe ngokukhethekile amadivayisi wesikrini esincane, ngakho-ke akukho okukhungathekisayo okwengeziwe kokudonswa kwe-lateral okudingekayo – njengoba kungaba njalo kumakhasino aku-inthanethi angazange enze amawebhusayithi awo abe nezikrini ezincane.
Konke ukusebenza okufana newebhusayithi esemqoka kulapha kuselula, futhi kukhona nokukhethwa okunempilo kwemidlalo – I-Genesis Casino ithole indlela yokuthi akudingeki ukuthi yehlise umtapo wayo wezincwadi kakhulu.
Ngingayidawuniloda yini i-Genesis Casino kufoni yami?
Ayikho inketho yesoftware ongayilanda etholakala kuGenesis Casino, ngakho-ke lokhu kusho ukuthi awukwazi ukulanda izikhala zayo noma imidlalo yetafula kunoma yimaphi amadivayisi wakho.
Kodwa-ke, leyo akuyona inkinga enkulu, ngoba izinhlobo zesiphequluli kulula kakhulu ukuzidlala noma kunjalo.
Izindlela Zokuhoxa Ezamukelwa e-Genesise Casino
Skrill Yebo 12-24 amahora
Neteller Yebo 12-24 amahora
EcoPayz Yebo 12-24 amahora
Izindlela Zokubhenkha Ezamukelwe e-Genesis Casino
Rapid Transfer Yebo
I-Genesis Casino Inhlangano Nemininingwane Yokuxhumana
Imininingwane Jikelele ye-Genesise
Ukuxhaswa Kwamakhasimende ka-Genesise
Kusungulwe: 2018 Inombolo Yamahala YaseNingizimu Afrika: 0800 992824
Opharethwa ngu: Genesis Global I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: I-Malta Gaming Authority, iKhomishini Yezokugembula yase-UK, Isiphathimandla Sokugembula saseSweden Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Izinzuzo nezingozi ze-Genesise Casino
- Imidlalo engaphezu kwengu-1 000 - Akukho ukukhushulwa okuqhubekayo
- Ibhonasi yokwamukela enkulu - Ayikho isoftware elandekayo
- Iwebhusayithi enhle / isayithi leselula
- Yethembekile futhi izimele
Yini Eyenza IGenesis Casino Ukhetho Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
Abadlali baseNingizimu Afrika bangafaka / bahoxe nge-Randi
Imidlalo engaphezu kwengu-1 000 kudeskithophu / kuselula
Ibhonasi enhle yokwamukela yabadlali baseNingizimu Afrika
Izikhalazo e-Genesis Casino yase Ningizimu Afrika
Awekho amaphromoshini aqhubekayo kwabadlali abakhona
Awukwazi ukulanda isoftware ka-Genesise Casino kwikhompyutha / ifoni / ithebhulethi
Ngabe i-Genesis Casino isemthethweni e-Ningizimu Afrika?
Ungayijabulela i-Genesis Casino ngokuzethemba okuphelele – iziphathimandla zaseNingizimu Afrika
le sayithi ihloliwe, ngakho-ke ungazizwa ukhululekile ukufaka / ukukhipha imali njengoba ufisa.
Ngiyikhipha kanjani imali ku-Genesise Casino?
Ukuqinisekisa ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho, hamba kunketho ye-cashier / yasebhange ngokuchofoza kunkinobho yemenyu. Lapho, khetha inketho yokuhoxa nokuthi iyiphi indlela yokukhokha ofisa ukuyisebenzisa, ukuthi ufuna ukukhipha malini, bese uqinisekisa ukuthengiselana!
Iyini i-Genesisi Casino?
I-Genesis Casino yiwebhusayithi ehlanganisa imidlalo ehamba phambili kakhulu nemidlalo yetafula endaweni eyodwa, amakhasimende aseNingizimu Afrika angafinyelela kuyo ngokusemthethweni nangokuzethemba okuphelele. Ungenza okungcono kakhulu ngebhonasi enhle kakhulu yokwamukela, futhi ujabulele imidlalo oyithandayo kukhompyutha yakho, i-laptop, i-smartphone noma ithebhulethi.
Ubani ongumnikazi we-Genesis Casino?
I-Genesis Casino iphethwe yinkampani enegama elifana ncamashi, i-Genesis Global Limited Casinos, futhi ibhekene nezindawo eziningi zekhasino ezisezingeni eliphakeme ezitholakala eNingizimu Afrika nangale kwawo. Lokho kufaka phakathi i-Casino Cruise, i-Casino Gods, i-Spinit, iCasoola nabanye abaningi ngaphandle.
Ingabe u-Genesise Casino unezici zokubheja ezemidlalo?
Ngeshwa, okwamanje okungenani, iGenesise Casino igxile kuphela ekusebenzeni kwayo kwamakhasino, ngakho-ke alukho uhlobo lokubakhona kwezemidlalo ekubhaliseni kwiwebhusayithi yalo.
Ngabe uGenesise Casino unikela ngohlelo lwe-VIP?
Ngoba u-Genesise Casino uthathe isinqumo sokugxila kuphela kubhonasi eyamukelekile nasekwakhiweni komtapo wolwazi wemidlalo, ngeshwa, kukhona igebe lapho ukukhushulwa kwalo okuqhubekayo nohlelo lwe-VIP kufanele lube khona. Ngokudabukisayo, alukho uhlelo lwe-VIP, esiluthatha njengokwengamela okukhulu engxenyeni yekhasino.
Yiziphi izidingo zokubheja ku-Genesis Casino?
Uma usebenzisa ibhonasi eyamukelekile enikezwa uGenesise Casino, kuzofanele wenelise izidingo zokubheja ezingama-40x ngaphambi kokuthi ukhiphe noma yikuphi ukuwina okuqoqeka ngebhonasi. Kafushane nje, uma uwina i- $ 1 ngebhonasi yakho, uzodinga ukubheja u- $ 40 ngaphambi kokuthi ukhiphe leyo $ 1. Sethemba ukuthi uzowina okuningi, kepha lesi yisibonelo nje esenziwe lula.